January 19, 2022 Chima Godswill
Haddii aad ku nooshahay agagaarka Houston oo aad doonayso inaad noqoto kalkaaliso caafimaad, doorashada mid ka mid ah dugsiyada kalkaalinta caafimaad ee weyn ee Houston waxay noqon doontaa wax aad u fiican. Si lagaaga caawiyo inaad mid hesho, waxaan soo diyaarinay dhowr dugsi kalkaaliso oo ku yaal Houston oo laga yaabo inaad rabto inaad ka qeyb gasho maqaalkan.
Waxaa la dhihi karaa, iskuulada halkan ku taxan waa iskuulada kalkaalinta caafimaadka ee ugu sareeya Houston. Waxay bixiyaan qiimaha ugu wanaagsan inta ay soo saarayaan kalkaaliyaal wax -ku -ool ah oo had iyo jeer ugu sarreeya cayaartooda oo gaara himilooyinkooda xirfadeed.
Ikhtiyaarradaan waxaa loo bixiyay si aad u sahamiso ikhtiyaarrada adiga kuu shaqeeya adiga oo aan u gudbin waddanka oo dhan.
Markaa si taxaddar leh u hel liiska iskuulada kalkaalinta ugu fiican ee Houston. Laakiin ka hor intaanan eegin liistada, miyaad si fiican u fahamsan tahay waxa kalkaalinta kalkaalintu tahay? Aan aragno…
1 Waa maxay Dugsiga Kalkaalinta?
2 Iskuulada kalkaalinta ugu fiican ee Houston Texas
2.1 1. Dugsiga Cizik ee Dugsiga Kalkaalinta
2.2 2. Jaamacadda Texas Woman's University Houston Center
2.3 3. Prairie View Texas A&M University
2.4 4. Jaamacadda St. Thomas - Texas
2.5 5. Jaamacadda Houston Baptist University
2.6 6. Kulliyadda Kalkaalisada ee Chamberlain
2.7 7. Jaamacadda Houston School of Nursing
2.8 8. Sam Houston State University
2.9 9. Jaamacadda Mary-Hardin Baylor
2.10 10. Jaamacadda Texas ee Austin
3 Iskuulada Kalkaaliyeyaasha Kalkaaliyeyaasha ee ugu Fiican Houston
3.1 Jaamacadda St. Thomas
3.2 2. Jaamacadda Houston Baptist University
3.3 3. Machadka Caafimaadka Smithwood
3.4 4. Kulliyadda Kalkaalisada ee Chamberlain
4 Iskuulada Kalkaalisada BSN ee ugu Fiican Houston
4.1 1. Dugsiga Cizik ee Dugsiga Kalkaalinta
4.2 2. Jaamacadda Texas Woman's University Houston Center
4.3 3. Prairie View Texas A&M University
4.4 4. Sam Houston State University
6.1 27 Jaamacadaha ugu sareeya Kanada oo leh deeqo waxbarasho
6.2 13 Deeq waxbarasho oo buuxda oo ay siisay Dowlada Kanada
6.3 Gargaarka Maaliyadeed ee Kanada ee Ardayda Maraykanka
6.4 Sida Loo Helo Deeqaha waxbarasho ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda Gudaha iyo Kuwa Caalamiga ah
6.5 Sida Loogu guuleysto Deeqaha PhD ee Kanada
Waa maxay Dugsiga Kalkaalinta?
Dugsiga kalkaalinta waa nooc ka mid ah machad waxbarasho (ama qayb ka mid ah) oo siiya waxbarasho iyo tababar dadka doonaya inay noqdaan kalkaaliyeyaal aqoon buuxda leh.
Dabeecadda waxbarashada kalkaalinta iyo shahaadooyinka kalkaalintu aad bay ugu kala duwan tahay waddan ilaa waddan. Waxbarashada kalkaalinta ayaa si aad ah u soo hagaagtay dhowr waddan tan iyo bartamihii qarnigii labaatanaad.
Iskuulada kalkaalinta ugu fiican ee Houston Texas
1. Dugsiga Cizik ee Dugsiga Kalkaalinta
Dugsiga Cizik ee Kalkaalisada, oo ku yaal xerada Jaamacadda Texas, waa afka, laakiin waxay leedahay wax badan oo ay soo bandhigto. Dugsiga Caafimaadka ee UT ee Kalkaalisada Caafimaadka ee Houston wuxuu leeyahay mid ka mid ah heerka ugu sarreeya ee ka -dhaafka NCLEX ee gobolka –waxbarashada oo si yaab leh macquul u ah. Tiro ka mid ah barnaamijyada BSN Bridge ayaa kuu oggolaanaya inaad ku dhammaysato BSN -kaaga jadwalkaaga. Haddii aad dareento inaad ku qasban tahay inaad si gaar ah u takhasusto ka dib markaad kasbato BSN -kaaga, UT Health School wuxuu bixiyaa shahaadooyin kala duwan ee mastarka ee kalkaalinta. Baro wax badan oo ku saabsan barnaamijyadooda kalkaalinta adigoo booqanaya boggooda internetka.
Dugsiga waa la aqoonsan yahay oo boqolkiiba 96.6 murashaxiinta u fadhiista NCLEX ayaa ku gudba imtixaanka.
Lacagta wax lagu barto ee ardayda gobolka ku nool waa $ 14,174.
2. Jaamacadda Texas Woman's University Houston Center
Barnaamijka kalkaalinta ee Jaamacadda Texas Woman's University wuxuu leeyahay saddex goobood: Denton, Dallas, iyo Houston. Waxaad iska qori kartaa barnaamijka BSN oo buuxa, barnaamijka dhammaadka usbuuca ee BSN, ama barnaamijka RN to BSN ee Houston. Xarunta TWU Houston waxay bixisaa dukaan hal-joog ah dhammaan shaybaarrada, tas-hiilaadka jilitaanka, hoolalka muxaadarooyinka, iyo in ka badan oo ku yaal wadnaha Houston. Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wax-ku-oolka badan Texas iyadoo la ilaalinayo shuruudaha tacliimeed iyo xirfadeed ee aadka u wanaagsan. Dhab ahaantii, wax laga fekero!
92 boqolkiiba murashaxiinta NCLEX ayaa gudba imtixaanka.
Lacagta wax lagu barto ee ardayda gobolka ku nool waa $ 6,450.
Jaamacadda Texas A&M waxay bixisaa barnaamij BSN aad u fiican, iyo sidoo kale qalin-jabinta iyo barnaamijyada kalkaalinta heerka-dhakhtar. Waa beddel tijaabin ah oo loogu talagalay shakhsiyaadka doonaya inay sii joogaan Houston sababta oo ah xeradeeda quruxda badan, nolosha ardayga oo buuqsan, iyo goob ku habboon. Waxay kaloo leeyihiin in ka badan qarni khibrad u leh waxbaridda kalkaaliyayaasha Texas.
In-State Waxbarashada: $ 11,639
Heerka Gudbinta NCEX: 88 boqolkiiba
Akhri: 30 Dugsiyada Injineeriyada Biyomediga ugu Fiican
4. Jaamacadda St. Thomas - Texas
Jaamacadda St. Thomas waa jaamacad gaar loo leeyahay oo Kaatoolig ah oo ku taal Houston oo bixisa shahaadooyinka bachelor -ka ee kalkaalinta iyo shahaadooyinka dhakhtarnimada ee kalkaalinta kalkaaliyayaasha marxaladaha kala duwan ee xirfaddooda. Waxay ka soocan yihiin hay'ado badan oo dadweyne oo waaweyn sababtoo ah tas-hiilaadkooda casriga ah, baaxadda barnaamijka yar, iyo xooga saarista kalkaalisada sida joogitaan bogsiin meel kasta oo ay ka hawlgalaan.
88.5 boqolkiiba murashaxiinta NCLEX ayaa gudba imtixaanka.
Lacagta wax lagu barto ee ardayda gobolka ku nool waa $ 12,193. (ka dib markii la helay gargaar maaliyadeed oo dhexdhexaad ah)
5. Jaamacadda Houston Baptist University
Jaamacadda Houston Baptist University waa jaamacad gaar loo leeyahay oo Masiixi ah oo in yar ka qaalisan qaar ka mid ah dugsiyada kale ee kalkaalinta caafimaadka ee Houston, laakiin waxaa jira kaalmo dhaqaale oo aad u badan si looga caawiyo kharashyadaas. Waaxdooda Kalkaalisadu waxay bixisaa labadaba BSN iyo BSN-shahaado sharaf, iyo sidoo kale koorsooyin waxbarasho guud oo qayb ka ah manhajkooda kalkaalinta. Ballan-qaadka kulliyadda ee ardayda waxaa lagu muujiyey heer dhaafsiisan NCLEX oo aad uga sarreeya celceliska ardayga iyo macallinka.
86.8% murashaxiinta NCLEX ayaa ku gudba imtixaanka.
Lacagta wax lagu barto ee ardayda gobolka ku nool waa $ 30,480.
6. Kulliyadda Kalkaalisada ee Chamberlain
Kulliyadda Kalkaalisada ee Chamberlain waxay bixisaa barnaamij BSN saddex sano ah oo leh xulashooyinka RN ilaa BSN iyo Militariga BSN. Goobtooda Simcare Center waxay u oggolaanaysaa kalkaaliyayaasha in ay ku tababartaan xirfadaha bukaan-socodka iyada oo ay kormeerayaan kalkaaliyayaal xirfadlayaal ah iyo barayaal, barnaamijyadooda la dardargeliyeyna waxay ka caawiyaan ardayda inay sida ugu dhaqsaha badan u galaan warshadaha iyagoo u oggolaanaya inay dugsiga si buuxda u xaadiraan xilliga xagaaga haddii la rabo. Chamberlain waa beddel rafcaan u ah arday badan sababta oo ah heerka baas ee NCLEX ee sarreeya iyo waxbaridda jaban.
78.4 boqolkiiba murashaxiinta NCLEX ayaa gudba imtixaanka.
Lacagta wax lagu barto ee ardayda gobolka ku nool waa $ 16,200.
7. Jaamacadda Houston School of Nursing
Jaamacadda Houston ee Dugsiga Kalkaalisada ayaa si joogto ah u lahayd heerarka gudbinta NCLEX ee sarreeya - 100% mid kasta oo ka mid ah saddexdii sano ee la soo dhaafay, taasoo gelisay 5% sare ee dugsiyada kalkaalinta dalka oo dhan. Waxay haystaan ​​barnaamijka RN ilaa BSN iyo sidoo kale barnaamijka BSN ee heerka koowaad ah, xarun jilitaan heer sare ah oo heer sare ah, iyo shaqaale iyo macallimiin kor u dhaafaya ardaydooda. Sugar Land waxay hoy u tahay Jaamacadda Houston School of Nursing.
Heerka Gudbitaanka NCLEX: 100%
Wax-barashada ardayda gobolka ku nool waa $ 11,989 sanadkii.
Sidoo kale Akhri: Sida loogu Barto Daawada Kanada Bilaash
Jaamacadda Sam Houston State University waxay saacad ka badan u jirtaa Houston, barnaamijkeedii kalkaalintana wax badan baa laga hayaa. Heerka baas ee NCLEX ee sarreeya, taariikhda dheer ee guusha iyo dhaqanka, iyo ka go'naanta koritaanka ayaa ah qaar ka mid ah astaamaha lagu garto manhajka Sam Houston. Jaamacadda Sam Houston State waxay bixisaa barnaamij kalkaalinta kahor, BS ee Kalkaalisada, barnaamijka RN ilaa BSN, iyo barnaamijka LVN ilaa RN, sidaa darteed meel kasta oo aad ka joogto xirfaddaada, waxay u badan tahay inaad hesho barnaamij kugu habboon.
90% murashaxiinta NCLEX ayaa ku gudba imtixaanka.
Wax-barashada ardayda gobolka ku nool waa $ 13, 000.
9. Jaamacadda Mary-Hardin Baylor
Jaamacadda Mary-Hardin Baylor waa mid ka mid ah jaamacadaha masiixiga ee ugu sarreeya Houston, oo leh waaxda kalkaalinta oo ka mid ah kuwa ugu da'da weyn gobolka.
Scott & White School of Nursing ee Jaamacadda Mississippi ee Birmingham waxay ardayda siisaa xarun jilitaan casri ah, tas-hiilaad heer sare ah, fursado ay dibedda wax ku bartaan oo ay caawiyaan dadka kale, iyo macalimiin heer sare ah-laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan dugsiyada liiska ku jira.
Barnaamijyada BSN iyo RN ilaa BSN, iyo sidoo kale barnaamijyada kalkaalinta qalin -jabinta iyo dhakhtarnimada, ayaa dhammaantood laga heli karaa UMHB. UMHB waxay qiyaastii saddex saacadood u jirtaa magaalada Houston.
Heerka Gudbitaanka NCLEX: 80%
Lacagta wax lagu barto ee ardayda gobolka ku nool waa $ 24,000.
10. Jaamacadda Texas ee Austin
Jaamacadda Texas ee Austin waxay bixisaa manhaj kalkaalineed oo dhammaystiran oo ay ku jiraan ADN ilaa BSN track, track BSN, master iyo darajo heer dhakhtar ah, iyo qaar kaloo badan. Ururka Kulliyadaha Kalkaaliyeyaasha ee Mareykanka ayaa barnaamijka ku abaalmariyey abaalmarinta waxbarashada kalkaalinta xirfadeed ee caanka ah, dugsiguna wuxuu leeyahay heerka gudbinta NCLEX oo joogto ah. Ardaydu waxay jecel yihiin fasalladii iyo waxyaabihii wax -ku -oolka ahaa ee dugsiga oo dhowaan dib -u -habayn lagu sameeyay, iyo sidoo kale macallimiin dhegaysanaysa.
Lacagta wax lagu barto ee ardayda gobolka ku nool waa $ 18,000.
Post laxiriira: Top 15 Deeqaha Cudurka Dabeecadaha ee Ardayda
Iskuulada Kalkaaliyeyaasha Kalkaaliyeyaasha ee ugu Fiican Houston
Halkan fadhigan, waxaan ku arki doonnaa qaar ka mid ah dugsiyada sare ee kalkaalinta gaarka loo leeyahay ee Houston.
Houston Baabtiisaha University
Machadka Caafimaadka Smithwood
Kuleejka Kalkaalinta Caafimaadka ee Chamberlain
Dugsiga Kalkaalisada Xirfadda
2. Jaamacadda Houston Baptist University
Jaamacadda Houston Baptist University waa jaamacad gaar loo leeyahay oo Masiixi ah oo in yar ka qaalisan qaar ka mid ah dugsiyada kale ee kalkaalinta ee Houston, laakiin waxaa jira kaalmo maaliyadeed oo aad u badan si looga caawiyo kharashyadaas. Waaxdooda Kalkaalisadu waxay bixisaa labadaba BSN iyo BSN-shahaado sharaf, iyo sidoo kale koorsooyin waxbarasho guud oo qayb ka ah manhajkooda kalkaalinta. Ballan-qaadka kuliyadda ee ardayda waxaa ka muuqda heerka ka-gudubka NCLEX oo aad uga sarreeya iyo saamiga ardayga-macalinka oo hooseeya.
3. Machadka Caafimaadka Smithwood
Machadka Caafimaadka Smithwood Llc wuxuu ku yaal Houston, TX, laakiin sidoo kale wuxuu bixiyaa fasalo onlayn ah. Dugsigani wuxuu bixiyaa tababar ku saabsan 18 shahaadooyin, iyadoo shahaadooyinka ugu badan ee dib loo eegay ay yihiin Farsamaynta Farsamaynta Phlebotomy (CPT), Kaaliyaha Kalkaalisada ee Shahaadaysan (CNA), iyo Shahaadada Taageerada Nolosha Aasaasiga ah (BLS). Qiimaha lagu dhigto Machadka Caafimaadka ee Smithwood Llc wuxuu u dhexeeyaa $ 400 illaa $ 1,800 iyadoo ku xiran aqoonta.
4. Kulliyadda Kalkaalisada ee Chamberlain
Jaamacadda Chamberlain waa mid ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Houston oo bixiya barnaamijyada shahaadada kalkaalinta iyo caafimaadka xirfadaha iyo xulashooyinka oo ay weheliso taageero kaa caawisa inaad ku guulaysato. Iskuulku wuxuu leeyahay in kabadan 23 xarumood oo kuyaala wadanka oo dhan iyo 99,000 alumni oo si fiican ugu shaqeynaya warshadaha.
5. Dugsiga Kalkaalisada Xirfadeed
Machadka Kalkaalisada Xirfadeed waa waayo -aragnimo waxbarasho oo aad u xiiso badan, madadaalo leh, oo xiiso leh. Tirada fasallada waxay ardayda siinaysaa fursad ay ku weydiiyaan su'aalo oo ay dib u eegaan mowduucyada aan la fahmin. Khibradaha barashada gacmaha-la-qabsigu waxay ardayda si sax ah u bartaan sida loo maareeyo hawlaha kala duwan ee mannequin-ka ka hor intaan la gelin guryaha waayeelka ah. Dugsigu wuxuu kaloo bixiyaa fiidyowyo, dhibco awood, iyo is -dhexgal afka ah si loogu oggolaado ardayda inay si sax ah u fahmaan sida loo sameeyo hawlo/doorar kala duwan ee CNA.
Iskuulada Kalkaalisada BSN ee ugu Fiican Houston
Hoos waxaa ku yaal liistada iskuulada kalkaalinta ugu fiican ee Houston halkaas oo aad ka heli karto shahaadada koowaad ee shahaadada kalkaalinta.
Waxbarashada Gudaha-Gobolka: $ 11,639.
Jaamacadda Sam Houston State waxay bixisaa barnaamij kalkaalinta kahor, BS ee Kalkaalisada, barnaamijka RN ilaa BSN, iyo barnaamijka LVN ilaa RN, sidaa darteed meel kasta oo aad ka joogto xirfaddaada, waxay u badan tahay inaad hesho barnaamij kugu habboon.
Kalkaaliyayaashu waxay caawiyaan bukaanada iyo qoysaska waqtiyada ay u baahan yihiin. Kalkaaliso heer sare ah waa in ay awood u leedahay in ay dhegeysato, fikirayso, abaabusho, oo hoggaamiso. Intii lagu gudajiray xirfadda qofka, shaqsigu kaliya ma kasbado hab -nololeed macquula laakiin wuxuu kaloo dareemaa wanaag u -adeegidda aadanaha iyada oo loo marayo xirfadiisa.
Isqorista mid ka mid ah iskuulada kalkaalinta caafimaadka ee Houston sida ku taxan maqaalkan waa hal dariiqo oo lagu bilaabi karo xirfad kalkaalineed oo qurux badan.
27 Jaamacadaha ugu sareeya Kanada oo leh deeqo waxbarasho
Gargaarka Maaliyadeed ee Kanada ee Ardayda Maraykanka
Previous Post:5 Faa'iidooyinka Ugu Weyn ee Isticmaalka Fiidiyowga Waxbarashada
Post Next:5 Dugsi Ciidan oo ku yaal Florida